Miaraka amin'ny fisian'ny laharana asa aman-draharaha, tsikera an-tserasera ary haino aman-jery sosialy, ny ezaka fanampiana ny mpanjifan'ny orinasanao dia tafiditra ankehitriny amin'ny lazan'ny marika sy ny traikefan'ny mpanjifanao amin'ny Internet. Mazava ho azy fa tsy maninona ny ezaka lehibe ataon'ny varotrao raha tsy ampy ny fanohanananao sy ny traikefanao.
Raha ny valiny amin'ireto rehetra ireto dia "eny", tokony hiverina any amin'ny solaitrabe ianao ary hamerina hijery ny anao paikadin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa. Mba hitarihana anao, andao ho fantatsika ny hoe "maninona" alohan'ny "ahoana" ary jereo ny antony mahatonga ny mpanjifanao milomano mankamin'ny lafiny "maizina". Ireto misy tranga roa azo inoana:
Na dia tsy dia misy dikany aza izany dia misy ny zavatra atao hoe "manao be loatra" raha ny serivisy ho an'ny mpanjifa no resahina. Miorim-paka foana amin'ny zavatra rehetra 'azo ampiharina,' azontsika fa tsy azo atao ny manolotra fanampiana isaky ny fantsona na ho; omnipresent 'amin'ny heviny iray. Ny tsy fahampian'ny renin'olombelona sy ny fandaniam-bola tafahoatra dia matetika no voalaza fa antony voalohany nahatonga izany. Ho an'izay, ny lojika dia milaza fa tsara kokoa raha misafidy ireo fantsona mety misy dikany ho an'ny mpanjifanao ianao.
Mieritreritra fanampiana ny mpanjifa amin'ny dia iray ary fantaro ireo teboka fanalahidy manan-danja izay mampahafantatra ny mpanjifa momba ny fanovana natao tamin'ny rafitra mpanohana. Anisan'izany ireo ohatra: toy ny fanodinana ireo pejy fipetrahana taloha amin'ny seha-pifanakalozan-kevitry ny fiarahamonina izay ahitan'ny mpanjifa fitaovana vaovao sy manentana amin'ny fivoaran'ny marika - mifandraika amin'ny fanohanana na amin'ny fomba hafa.
Fandehanana lehibe: Ny fitenenana, "tsara kokoa" dia tsy tsara kokoa rehefa mampiasa fitaovana amin'ny fanolorana traikefa amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa. Indraindray, safidy vitsy kokoa sy mifantoka kokoa no manao ilay asa tsara kokoa sy haingana kokoa. Ary koa, misy dikany ny fitarihana ny mpanjifanao mandritra ny 'fanovana' izay atao amin'ny alàlan'ny fifandraisana mazava sy mahomby ary manome safidy safidy hafa.
Scenario 2: Tsy mifantoka "ampy" amin'ny traikefa fanohanan'ny mpanjifa "ratsy" ianao.
Raha ny marina, ny fanadihadiana notontosain'ny Security Council an'ny mpanjifa dia nahita antsipiriany mahaliana roa izay tokony hamorona ampahany amin'ny paikadin'ny mpanjifa tsirairay: Nilaza izy fa:
Ny dikan'izany dia ny faribiboky ny tombam-bidin'ny marikao dia tokony hanodidina ny fanalefahana ny ahiahin'ireo mpanjifa fa tsy hanolotra endrika tsy dia ilaina loatra
Misafotofoto? Andao haka ohatra iray. Ny tianay holazaina dia hoe na dia mety mangataka fanampiana amin'ny telefaona aza ny mpanjifa, ny tena tena tadiavin'izy ireo dia valiny haingana. Ho an'izany, amporisihina mafy ny ekipanao mpanohana anao hiatrika fiofanana izay afaka manampy azy ireo hamaly haingana ny fangatahan'ny mpanjifa.
Tsy misy isalasalana fa raha momba ny serivisy ho an'ny mpanjifa, ny orinasa samy hafa dia misafidy paikady samihafa - miankina amin'ny filàn'izy ireo, ny andrasan'ny mpanjifa, ny olana amin'ny teti-bola sns. Fanampin'izay, miaraka amina plethora misy safidy azo atao ankehitriny, dia mety hanjary misafotofoto sy mavesatra be ny milaza azy kely indrindra. Mba hahamora ny zavatra anao dia notanisainay ny lafy tsara sy lafy ratsy ho an'ireo fantsona mpanohana mpanjifa efatra miasa ankehitriny, dia ny:
Mila fahaizana manokana be dia be toy ny fahaizana mamaky ny sain'ny mpampiasa sy mamaky eo anelanelan'ny tsipika. Ny fifandraisana dia tsy ankolaka ary mety hivadika. Amin'ny ankapobeny, ny tontolon'ny fifandraisana dia mety ho very eo afovoan'ny fifanakalozana mailaka marobe.
Manolotra fomba isan-karazany ahafahan'ny orinasa mamaha ny olan'ny mpampiasa toy ny fanehoan-kevitra, hafatra manokana / mivantana, ary hafatra ho an'ny vondrona. Manampy amin'ny fanaovana fikarohana eny amin'ny tsena izany ary hahatakatra tsara ny mpampiasa anao.
Izy io dia mety handoto ny endrik'ilay marika raha be loatra ny lahatsoratra ratsy hita eo amin'ny sehatry ny daholobe toa ny Facebook, Twitter, sns. Ny fanaovana ny marina sy ny ho avy dia mety hampihena ny fahasimbana araka izay tratra farany azo atao.
Miaramila miaraka amin'ity fampahalalana rehetra ity, tonga ny fotoana handehanana mandaha-teny ary hanomezana traikefa ananan'ny mpanjifa tsy misy dikany - iray izay mampiala voly sy mampianatra ny mpanjifa miaraka amin'ny fotoana iray. Ao ve ianao? Noheverinay izany.